Madaxwaynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada xukuumadda federaalka Soomaaliya. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Allhadaaftimo October 18, 2018 Uncategorized
Madaxwaynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa maanta guddoomiyay shirka golaha wasiirrada xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Kulanka golaha wasiirrada ayaa lagu soo bandhigay warbixinno la xariira shaqooyinka ay qabtaan tubaha horumarinta arrimaha bulshada, Amniga iyo caddaaladda, siyaasadda loo dhanyahay iyo tubta horumarinta dhaqaalaha iyo shaqooyinka hor-tebinta leh ee u yaalla tubaha hawlaha lagu guulaystay qabashadooda.
Madaxwayne Farmaajo ayaa ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumadiisa ku ammaanay shaqada wanaagsan ee ay qaranka u hayaan isaga oo sheegay in wada shaqaynta wanaagsan ee madaxda qaranku ay sabab u tahay wanaajinta shaqada xukuumadda iyo taabba gelinta qorshaha qaranka.
Madaxwayne Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo xukuumaddiisa kula dardaarmay in ay sii laba jibbaaraan shaqada ay u hayaan ummadda Soomaaliyeed si guul looga gaaro fulinta qorshayaasha qaranka.
Previous Taliyaha Ciidamada Madaxtooyada Somalia oo sheegay in Ciidan cusub loo tabbabaraayo Madaxtooyadda
Next Madaxweynahii Hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh maxamud Ayaa Sheegay Inaysan wanaagasanayn Inay Dowlad Goboleedyada Ka Hor Imadaan Dowlada faderalka ee Iyadu Ah Dowlada Dhexe